छरछिमेक पनि काममा निस्किने समयमा एक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको नरसंहार? प्रहरीलाई पनि खड्कियो यस्ता प्रश्न ? – Kantipur Np
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २७, २०७८ समय: ८:५५:०१
पछिल्लो अनुसन्धानको नतिजाले घटनामा आफन्तकै संलग्नता खुलेको छ । घटनामा २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीको संलग्नता भएपनि एक्लैले बिहानै यस्तो घटना कसरी गराए भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
संखुवासभा मादी नगरपालिका-१ उम्लिङमा गत सोमबार एकै परिवारका ६ जनाको ह’त्यापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा, संघीय प्रहरी इकाई धरान र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पुगेको थियो। प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिँदा २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्की घरमै थिए।
Last Updated on: September 12th, 2021 at 8:55 am